Calaamadaha Bilaashka ah ee loogu talagalay Cryptocurrency Laga soo bilaabo VfxAlert | vfxAlert official blog
Calaamadaha cryptocurrency ee bilaashka ah ee vfxAlert
Lacagta loo yaqaan 'Cryptocurrencies' waxay noqdeen isbeddel 2020. Bitcoin waxay sii wadaa inay dejiso heerar taariikhi ah, lacagaha TOP-10 waxay sidoo kale siinayaan fursad ay ku kasbadaan dulsaar sanadkiiba. Waxaan rabaa inaan lacag sameeyo, laakiin ka waran haddii aysan jirin lacag dhigaal badan? Jawaab: ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ah ah oo ah vfxAlert bilaash ah.
Calaamadaha binary ee bilaashka ah ee loogu talagalay cryptocurrencies ayaa la heli karaa isla marka la rakibo barnaamijka ama la soo dejiyo fidinta biraawsarka Chrome.
Muhiim: shardiga ugu weyn waa in boqolkiiba faa'iidada ku jirta xulashooyinka aysan ka yarayn 75-80%, haddii kale way adkaan doontaa in la magdhabo khasaaraha suurtagalka ah !
Calaamado ayaa loo isticmaali karaa xaqiijinta dheeraad ah ee tilmaamayaasha farsamada ee istiraatiijiyad kasta oo ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah ah. Ka soo horjeedka sidoo kale waa suurtagal: istiraatiijiyadda ama qaababka laambadda ayaa xaqiijinaya vfxAlert.
Cryptocurrencies waa hanti kacsan, gaar ahaan maalinta gudaheeda. Isbeddellada xooggan ayaa si dhakhso leh ugu beddelaya dhaqdhaqaaqyo dhinac ah oo leh ballac 40-60 dhibcood ah. Waxaa laga ganacsan karaa xuduudaha kanaalka qiimaha iyadoo la adeegsanayo calaamadaha binary-ka «Crypto Reverse».
Tusaalooyinka heshiisyada dhicitaanka 5 daqiiqo, fiiri fiidiyowgeena.
Maxaan ku jirin calaamadaha bilaashka ah?
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan ganacsiga calaamadaha binary ganacsiga qaybta « Sida ay u shaqeyso vfxAlert » iyo xaddidaadaha ugu muhiimsan ee calaamadaha ikhtiyaariga ikhtiyaariga ah ee bilaashka ah:
Qiimaha "Awoodda" waxaa lagu muujiyaa hal calaamadood oo afartiiba ah;
Wax war ah lagama hayo «Heatmaps».
Si aad uga saarto xayiraadaha, waxaad u baahan tahay inaad u beddelatid nooca loo yaqaan 'Pro-version' , oo leh xulashooyin dheeri ah oo ku saabsan sida lacag looga helo ikhtiyaarka ikhtiyaariga ah:
Ganacsaduhu wuxuu arkaa dhammaan macluumaadka calaamadaha. Isku-darka "calaamadaha + istiraatiijiyad sax ah oo ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah" ayaa kuu oggolaan doonta inaad ku aragto waqtiga xilliga ay "dhabta ah" suuqa bilaabmayo inuu is beddelo.
Lagu daray algorithm la-qabsi ah oo falanqeynaya tirakoobyadii hore ee xulashooyinka;
Ku darista dillaalkaaga. Ku iibso deebaajigaaga iyo istaraatiijiyadaada adigoon ka bixin vfxAlert.
U dirista calaamadaha kanaalada Telegram si looga ganacsado aaladaha moobaylka.
Miirayaasha calaamadaha iyo tirakoobka horumarsan ayaa kuu oggolaanaya inaad go'aamiso hantida ugu faa'iidada badan suuqa.
Sida astaamaha kale ee ganacsiga calaamadaha bilaashka ah ma siinayaan 100% dammaanad faa'iido, waxaad had iyo jeer u baahan tahay xaqiijin dheeraad ah. Waa inaadan iska indhatirin sidoo kale, runti way ku caawin karaan:
Khibrad ku hel barta ganacsiga laba-geesoodka ah ee koontada demo . Xisaab dhab ah, nidaamka ganacsigu xoogaa wuu ka duwan yahay koontada demo, laakiin waa ku filan tahay tijaabada hore.
Tijaabi fikradahaaga . Ka ganacsiga suuqyada maaliyadeed waa geedi socod shaqsiyeed aad u sarreeya, laakiin iyada oo aan la barbar dhigin fikradda qof kale, way noqon doontaa mid aan guuleysan. Had iyo jeer fiirso sida fikradahaaga u barbar dhigaan kuwa kale - marka inta badan calaamadaha ay kaa soo horjeedaan, waxaad u baahan tahay inaad beddesho istiraatiijiyadda.
Sii wad barashada ganacsiga . Websaydhka vfxAlert waxaa ku jira sharaxaad ku saabsan xeeladaha calaamadaha lagu go'aaminayo. Macluumaadka noocan oo kale ah waxay noqon karaan kuwo waxtar badan leh marka la abuurayo lana hagaajinayo hababkaaga gaarka ah - baro ganacsiga ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah wuxuu bixiyaa macluumaad guud oo keliya, qalab farsamo oo badan ayaa hadda si buuxda uga duwan qorayaashooda. Isku-darka "signalada + istiraatiijiyadda" ayaa kuu oggolaan doona inaad ku aragto waqtiga xilliga ay "dhabta" suuqa bilaabmayso inuu isbeddelo.